မိဘမဲ့ကလေးများကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ :: OCG တို့၏စာပေရေးရာ :: ဗဟုသုတလေးများ
by bunny on Mon 16 Aug 2010, 12:35
[center]ဒီမနက် ဖေဖေအိမ်ရာထတော့ အိမ်မှာဘယ်သူမှ ရှိမနေဘူး။ ဒါနဲ့ သမီးမေမေရဲ့ဟမ်းဖုန်းကို ကောက်ဆက်တော့ ဖုန်းကို သမီးကကိုင်တယ်။
သမီးမူကြိုတက်စမှာ မိဘတွေကို ကျောင်းကအသိပေးစာတစ်စောင် ပို့ပေးခဲ့တာ သမီးမှတ်မိသေးလား? အဲဒီအသိပေးစာမှာ မိဘတွေဟာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ထားတယ်။
မကြာသေးခင်က သမီးတို့ကျောင်းမှာ စာရွက်တစ်ရွက်ဝေတာ သမီးမှတ်မိလား? အဲဒီစာရွက်ပေါ်မှာ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ သင်ထားတယ် မဟုတ်လား? စာရွက်ပေါ်မှာ "Nice Expressions"လို့ ရေးထားတယ်။
(Let's Take Turns.)
(I'll Share with you.)
(It's Your Turn Now.)
(I'll Show You Now.)
ဒါမှမဟုတ် ဖန်ခွက်ကိုထိုးပြပြီး လွယ်ကူတဲ့စကားနဲ့ “ကျွန်မ...ရနိုင်မလား?” (May I?)လို့ မေးသင့်တယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းက ကိုယ်နဲ့ဝေးဝေးမှာရှိခဲ့ရင် တခြားလူအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် မအော်ခေါ်ရသလို ခွက်အလွတ်ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး ခိုင်းစေလို့ မရဘူးသမီး… တကယ်လို့ ခွက်အလွတ်ကိုထိုးပြပြီး စကားမပြောခဲ့ရင်တောင် သူ့ကိုကြည့်ပြီး သမီးပြုံးပြရမယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ မကောင်းဘူးလို့ ငြင်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကရော ဒီအမူအကျင့်တွေကို မသိနိုင်ဘူးလား? သတိမထားနိုင်ဘူးလား? မယဉ်ကျေး၊ မသိမ်မွေ့ရင် ကိုယ်ပဲ အမြဲနစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်။ ကိုယ်အင်္ဂါရုပ်ရည်ကို ဖေဖေတို့ ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပေမယ့် အဲဒီရုပ်ရည်ပေါ်မှာ အပြုံးတွေတော့ ဖေဖေတို့ ဆင်မြန်းနိုင်ကြပါတယ် သမီး....
မူရင်းရေးသားသူ - Liu Yong (劉鏞) သမီးအတွက်ပေးစာ
Jump to: Selectaforum||--ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ| |--ရည်ရွယ်ချက်| |--လုပ်ဆောင်ချက်များ| |--သတင်းပေးနိုင်ရန်| |--ဆက်သွယ်နိုင်ရန်| |--ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ| |--အသင်းဝင်များဖတ်ပေးပါရန်| |--ဖိုရမ်အသုံးပြုနည်းအဆင့်ဆင့်| |--OCG Mail Service Request| |--အဖွဲ့ ၀င်များမိတ်ဆက်ရန်| |--မိတ်ဆက်ရန်| |--မွေးနေ့ဆုတောင်း| |--လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံလေးများ| |--အလုပ်ခွင်မှ ပျော်ရွှင်စရာလေးများ| |--အလုပ်ခွင်မှ ပြသနာလေးများ| |--OCG တို့၏စာပေရေးရာ| |--ဓမ္မပဒေသာ| |--ကဗျာလေးများ| |--၀တ္ထုလေးများ| |--ဗဟုသုတလေးများ| |--ဟာသလေးများ| |--ကိုယ်ပိုင်အတွေးစာစုများ| |--OCG တို့၏လူမှုဘ၀ရေးရာ| |--လူမှုဆက်ဆံရေး| |--ကျန်းမာရေး| |--ပညာရေး| |--အားကစား| |--OCG တို့၏နည်းပညာရေးရာ| |--Information Technology (IT)| | |--Window XP OS များ| | |--Hardware| | |--Software| | |--Internet&Email| | |--Networking| | |--WebDesign| | |--Graphic Design| | | |--ဆော့ဝဲ Download| | |--ဆော့ဝဲတောင်းမယ်| | |--ဆော့ဝဲတင်မယ်| | | |--Mobile Phone| |--Mobile Phone အမျိုးအစားများ| |--Mobile Phone Software| |--OCG တို့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့| |--ဥာဏ်စမ်းကဏ္ဍ| |--သီချင်းလေးတွေဖျက်ဆိုကျမယ်| |--အသင်းအဖွဲ့လေးများ| |--OCG တို့၏အကူအညီရေးရာ |--အကြံပြုချက်လေးများ